Ukuphefumlelwa: Tom Peters | Martech Zone
Ukuphefumlelwa: UTom Peters
NgoLwesithathu, Septemba 13, 2006 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Ndandinosuku olunzima. Ndineveki enzima. Mhlawumbi bekuyinyanga. Ndidinga ukukhuthazwa. Namhlanje ndiqwalasele izilayidi ezimbalwa ukusuka UTom Peters, Nazi ezinye iintandokazi zokwabelana:
Ukuba awuluthandi utshintsho, awuzukuthanda ukungabaluleki nakancinci. - Jikelele u-Eric Shinseki, oyiNtloko yaBasebenzi. Umkhosi wase-US
Kukusukela izinto ezintsha rhoqo kuphela kunokuqinisekisa impumelelo yexesha elide. -UDaniel Muzyka, uDean, iSauder School of Business, iYunivesithi yaseBritish Columbia (FT / 2004)
Abaphuliweyo bavumele ukukhanya - uTom Peters
Ishishini lethu lifuna ukudluliselwa kwetalente enkulu, kwaye ndiyakholelwa, ukuba kunokwenzeka ukuba ifumaneke phakathi kwabangathobeliyo, abaphikisi kunye nabavukeli. -UDavid Ogilvy
Abantu bafuna ukuba yinxalenye yento enkulu kunabo. Bafuna ukuba yinxalenye yento abazingcayo ngayo, abaya kuyilwela, bazincame ngenxa yabo, bayithembe. -UWoward Schultz, Starbucks (IBD / 09.05)
Ukuba izinto zibonakala ziphantsi kolawulo, awuhambi ngokukhawuleza ngokwaneleyo. -Umario Andretti
Inyathelo lokuqala kwi-âmdakaâ ?? Inkqubo yotshintsho kulungelelwaniso icacileâ? -RG
Umzimba ungenza ngathi uyakhathala, kodwa abanako'ukuzenza ngathi ulapho. -I-Texas Bix Bender
Iipesenti ezingama-XNUMX zento esiyibiza ngokuba yi-â ?? kubandakanya ukwenza kube nzima ukuba abantu benze izinto. â ?? UPeter Drucker
Ukuphunyezwa yinkqubo ecwangcisiweyo yokuxoxa ngokungqongqo ukuba zenziwa njani kwaye zenziwa njani, zilandelwe kakuhle, kwaye kuqinisekiswe ukuphendula. -Larry Bossidy kunye noRam Charan / Ukuphunyezwa: Uqeqesho lokufumana izinto zenziwe
Abaphuhlisi besoftware abaphezulu banemveliso ngakumbi kunabaphuhlisi besoftware abaphakathi hayi nge-10X okanye i-100X, okanye i-1,000X, kodwa i-10,000X. -Nathan Myhrvold, owayesakuba yiNzululwazi eyiNtloko, iMicrosoft
Kwaye ndiyithandayo yam:
Nika abasebenzi bakho lonke ithuba lokuphumelela, kwaye ukuba abanakuphumelela banike ithuba lokuphumelela kwenye indawo. Ngamanye amaxesha oko kuthetha ukubagxotha. -Andikhumbuli ukuba ngubani na lo undixelele le nto, kodwa yanamathela kum.
Ndinqwenela ukuba ndingahamba nje imini yonke ndize ndiziphindaphinde ndiziphindaphinde ndiziphindaphinde…. kwaye ndiyathemba ukuba okungenani umntu omnye umamele.
Ukuzivocavoca ingqondo-kunye ncinane malunga noDoug
Iwindows Window… Indawo, Indawo, Indawo
Sep 14, 2006 kwi-9: 18 AM
Isicatshulwa sikaPeter Drucker yayiyeyona nto ndiyithandayo, iposi elungileyo uDoug.
Sep 14, 2006 ngo-1: 22 PM
I-Eeps, Ndiyathemba ukuba andiyenzanga kakubi iveki yakho, mhlawumbi bendiphazamiseka?
Into endiyithandayo mhlawumbi yile, "AbaQhekekileyo baVumele ekukhanyeni" - UTom Peters, njengoko ngokuqinisekileyo ndingumntu oqhekekileyo. Ukulandela ngokulandelayo sisicatshulwa sikaMario Andretti, njengoko ndifuna ngokwenene ukumamela loo nto kwaye ndingalumki kangako. Okokugqibela, ndiyathanda, "Inyathelo lokuqala kwi-âmangalisa '?? Inkqubo yotshintsho lwezinto icacile â € ?? utshintsho olukhulu lomntu! ” -RG, nangona ndivile ukubhalwa ngcono kwayo, njengokuthi, ukushwankathela, "Ukuba ufuna ukoyisa ihlabathi, kufuneka uqale uzoyise" okanye, "Inguquko ayiqali ngobume bezentlalo nezoqoqosho kuluntu. kwaye usebenze ngendlela eya ezantsi kuye umntu, kodwa ngaphakathi komntu omnye, usebenza ngendlela eya kulwakhiwo lwentlalo noqoqosho loluntu ”. Kwakhona ezi zizishwankathelo, eyokuqala enokubakho kubugcisa bemfazwe, ubuncinci ukusuka kwisithandi sobulumko esingasempuma ndicinga ukuba; Okwesibini kukuba, kholwa okanye ungakholelwa, kuJoseph Bueys, omnye wabaculi endibathandayo, osebenzayo kwiminyaka yama-60 kunye neye-70.
Sep 14, 2006 ngo-6: 46 PM
Ukuthetha nawe kube yinto eyonwabisayo. Amaxesha am anzima awadibananga nokubhloga kwam, yindawo yam yokuphuma!
Andiqinisekanga ukuba ngubani i-RG… yayiyireferensi kwenye yeentetho zikaTom Peter.
Ndivumelana nawe kwaye ndiyayithanda inyani yokuba zonke ezo zikowuteshini zifuna umntu ukuba athathe inyathelo kwinto ekuphela kwayo abanolawulo kuyo xa betshintsha = ngokwabo!